Eyesibili KuThimothewu 1:1-18
UPawulu ubonga uNkulunkulu ngokholo lukaThimothewu (3-5)
Qhubeka ubambelele emazwini anempilo (12-14)
Izitha zikaPawulu nabangane bakhe (15-18)
1 UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu ngokuvumelana nesithembiso sokuphila esikuthola ngoKristu Jesu, + 2 kuThimothewu, umntwana othandekayo: + Kwangathi ungathola umusa omkhulu,* isihe nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu iNkosi yethu. 3 Ngiyambonga uNkulunkulu, enginikela kuye inkonzo engcwele njengoba kwenza okhokho, ngonembeza ohlanzekile futhi angikukhohlwa ekunxuseni kwami ubusuku nemini. 4 Njengoba ngikhumbula izinyembezi zakho, ngilangazelela ukukubona ukuze inhliziyo yami ichichime injabulo. 5 Ngoba ngiyalukhumbula ukholo lwakho olungenabo ubuzenzisi, + olwahlala kuqala kugogo wakho uLowisi nakumama wakho u-Evnike, kodwa engiqinisekayo ukuthi lukhona nakuwe. 6 Ngenxa yalesi sizathu ngikukhumbuza ukuba usivuthele njengomlilo isipho sikaNkulunkulu esikuwe owasithola ngokukubeka kwami izandla. + 7 Ngoba uNkulunkulu akasinikanga umoya wobugwala, + kodwa owamandla + nowothando nowokuhluzeka kwengqondo. 8 Ngakho-ke, ungabi namahloni ngokufakaza mayelana neNkosi yethu + noma ngami, engiyisiboshwa ngenxa yayo, kodwa nawe khuthazelela ubunzima + ngenxa yezindaba ezinhle ngokuthembela emandleni kaNkulunkulu. + 9 Wasisindisa futhi wasibiza ngobizo olungcwele, + hhayi ngenxa yemisebenzi yethu, kodwa ngenxa yenjongo yakhe nomusa omkhulu. + Lo musa sawuphiwa ngoKristu Jesu kudala kakhulu, 10 kodwa manje wenziwe wabonakala ngokucacile ngokubonakaliswa koMsindisi wethu, uKristu Jesu, + oqede ukufa + futhi wenza ukuphila + nokungonakali + kwakhanya ngezindaba ezinhle, + 11 engabekwa ukuba ngibe umshumayeli wazo nomphostoli nomfundisi. + 12 Yingakho ngihlupheka ngalezi zinto, + kodwa anginamahloni. + Ngoba ngiyamazi Lowo engiye ngakholwa nguye, futhi ngiyaqiniseka ukuthi uyakwazi ukukuqapha lokho engikubeke kuye kuze kube yilolo suku. + 13 Qhubeka ubambelele esibonelweni samazwi* anempilo *+ owawezwa kimi, njengoba ubonisa ukholo nothando oluwumphumela wobunye noKristu Jesu. 14 Lokhu okuhle okuphathisiwe, kuqaphe ngomoya ongcwele ohlezi kithi. + 15 Uyakwazi lokhu, ukuthi bonke abantu esifundazweni sase-Asiya + bangifulathele, kuhlanganise uFigelu noHermogene. 16 Kwangathi iNkosi* ingapha indlu ka-Onesiforu isihe, + ngoba wayengilethela ukuqabuleka kaningi futhi akabanga namahloni ngokuba kwami semaketangeni. 17 Kunalokho, ngesikhathi eseRoma, wangifuna ngenkuthalo wangithola. 18 Kwangathi iNkosi* ingamupha ukuba athole isihe kuJehova* ngalolo suku. Wena ukwazi kahle konke angenzela kona e-Efesu.
^ Noma, “emazwini okuqala.”
^ Noma, “aphilayo; azuzisayo.”